घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डेनिश फुटबल खेलाडीहरू मार्टिन ब्रेथवेट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
मार्टिन ब्रेथवेटको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कथा, अर्ली लाइफ, अभिभावक, परिवार, पत्नी, बच्चाहरू, काका, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो डेनको जीवनयात्राको कहानी हो, बाल्यकालदेखि, जब उनी प्रसिद्ध भए। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, यहाँ वयस्क ग्यालेरीमा उसको पालना छ - मार्टिन ब्रेथवेटको बायोको एक सारांश।
हेर्नुहोस्, मार्टिन ब्रेथवेटको प्रारम्भिक जीवन र उदय।
हो, हामी लाग्छौं कि तपाईंले उहाँलाई सायद - यो खेलबाट टाढा जान्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, के तपाईंलाई थाहा छ? फोर्ब्सले एक पटक मार्टिन ब्रेथवेट र उनका काकालाई फिलाडेल्फिया लगानी गरेकोमा स्वागत गरे?
अझ, तपाईंले सायद मार्टिनको जीवन कथा पढ्न विचार गर्नुभएन खास गरी त्यो क्याप्सन; “व्हीलचेयरबाट एफसी बार्सिलोना“जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
मार्टिन ब्रेथवेटको बाल्यकाल कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उसले उपनाम पायो "सडक फाइटर“। पाँच वर्षको उमेरको रूपमा, सानो मार्टिन ब्रेथवेटलाई व्हीलचेयरमा बाध्य पारियो। निस्सन्देह, यो उसको बाल्यकालको सबैभन्दा हृदयस्थ पल हो।
उनको जन्म पछि, मार्टिन ब्रेथवेटका बाबुआमाले उनलाई वहन गरे नाम “मार्टिन क्रिस्टनसेन ब्रेथवेट“। उनीहरूको बच्चाको नामकरण गर्दा डेनिश परिवारको रीतिथिति अनुसरण गरियो, नामको रूपमाChristensen"मार्टिन ब्रेथवेटकी आमा (हेडी) ले बाबुसँग बिहे गर्नु भन्दा पहिले नै त्यो जन्म भयो। थर “ब्रेथवेट”उसको बुवाबाट आउँदछ।
मार्टिन ब्रेथवेट जून १51991 १ को mother तारिखमा उनको आमाको जन्म भएको थियो। Heidi Braithwaite र बुबा, कीथ ब्रेथवेट Esbjerg, डेनमार्क मा। बन्नेले आफ्नो इतिहासको ११ औं लिग उठाउँदा २ The दिन पछि डेनको जन्म भएको थियो। सत्य हो, मn को पहिलो वर्ष मार्टिन ब्रेथवेटको प्रारम्भिक जीवन, त्यहाँ बिल्कुल केहि छैन जो सुझाव दिन्छ कि ऊ हुर्कन्छ र एक फुटबल स्टार बन्छ, एक जो संसारको सबैभन्दा ठूलो क्लब मध्ये एक खेल्नेछ।
मार्टिन आफ्नो दाइ / दिदीको नामको साथ हुर्किए मथिल्डे ब्रेथवेट), एसबर्ग नगरपालिकाको समुद्रीतट शहरमा जटल्याण्ड प्रायद्वीप (दक्षिण पश्चिम डेनमार्क) को पश्चिमी तटमा अवस्थित छ। दुर्लभ र प्रारम्भिक बाल्यकालको फोटो हेर्नुहोस् मार्टिन ब्रेथवेट।
मार्टिन ब्रेथवेटको बाल्यावस्था फोटोको प्रारम्भिक- यहाँ, उहाँ उनीहरूको पारिवारिक घरमा आफ्ना दाइ-दिदीसँगै चित्रण गरिएको छ।
जब मार्टिन ब्रेथवेटको बाल्यावस्थाको समय थियो, त्यहाँ बस्ने शहरमा धेरै कालो मानिस थिएनन्। ले पेरिसियनका अनुसार (२०१ 2014) उनी सुरुमा भने कि उनी एक प्रकारको बच्चा थिए जसको एकदम कडा व्यक्तित्व थियो, तर पछि गएर जानु पर्छ।
मार्टिन ब्रेथवेटको परिवार पृष्ठभूमि र उत्पत्ति:
एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्केका, मार्टिन ब्रेथवेटका अभिभावक स्वप्नदर्शी प्रकारका थिए, जसले वित्तीय शिक्षाको राम्रो ज्ञान राखेका थिए। हुनसक्छ, तपाईंले आफ्नो मिश्रित-दौड अनुहारको हेराईमा विचार गरेको हुनुपर्छ र सायद प्रश्न सोध्नुभयो होला; -मार्टिन ब्रेथवेटको परिवार कहाँ छ?
सत्य हो, फुटबल अगाडि पूर्ण डेनिस छैन। तपाईंलाई थाँहा थियो?… मार्टिन ब्रेथवेटका आमाबुवा मध्ये एक, उनको आमा हेइडी उल्लेखनीय छ (तल चित्रमा) डेनिस उनको जन्म र परिवारको वंशावलीले गर्दा हो।
मार्टिन ब्रेथवेटका आमा बुबा- उनकी आमा हेदी ब्रेथवेट।
उनको आमा डेनमार्कबाट आउनु भनेको अलि बढी सामान्यीकरण गरिएको हो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… मार्टिन ब्रेथवेटकी आमा Heidi, एसेबर्गको डेनिस शहरबाट उनको परिवारको जरा छ, जो उनको छोराको जन्मस्थल हो। अर्को तर्फ, मार्टिन ब्रेथवेटको बुबा, कीथको परिवार उत्तरी दक्षिण अमेरिकाको पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश गुयानाबाट भएको हो।
मार्टिन ब्रेथवेट बचपन कहानी- Wहिलचेयर:
ब्रेथवेट बाल्यावस्थादेखि नै फुटबल पागल थिए। एउटा बाल्यकालमा उनको बलले लात हिर्काएको फोटो एक डेनिस अखबारले एक पटक दुई वर्षको छँदा समात्यो। तर उहाँ five बर्षको उमेरमा सबै बिग्रेको लागि बदल्नुभयो। गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको कारण डेनिस स्ट्राइकरलाई व्हीलचेयरमा बाध्य पारियो। यस अनुसार FourFourTwo, यो एक रोग भनिन्थ्यो लेग-काल्भ-पेर्थेस.
मार्टिनको खुट्टाको हड्डी असामान्य रूपमा विकसित भयो र विकृत भयो, जसले उसलाई हिंड्न गाह्रो बनायो। नतिजा स्वरूप, उसलाई कुनै पनि दबाबमा आफ्नो खुट्टा नलगाउन सल्लाह दिइयो, उदाहरणका लागि, वरिपरि दगुर्दै। यसैले गरिब डेनलाई ह्वीलचेयर प्रयोग गर्न बाध्य पारियो।
आफ्नो पीडाको बारेमा बोल्दै, उनले एक पटक भने;
“व्हीलचेयरमा बस्नु साँच्चै गाह्रो थियो। म धेरै जवान थिएँ र मलाई किन व्हीलचेयरमा बस्नु पर्छ बुझिन। Fustration मा, म सधै यसबाट बाहिर निस्कने कोसिस गर्दैछु। मलाई लाज लाग्यो।
त्यस बेला, मलाई बच्चाको जस्तो सँधै मेरो हेरचाह गर्न चारैतिर मानिसहरू चाहिएको थियो। म अरू बच्चाहरूले गर्ने काम गर्न सक्दिन। मैले गर्न चाहेको कुरा उठेर फुटबल खेल्नु थियो। ”
मार्टिन ब्रेथवेट जीवनी- प्रारम्भिक जीवन (क्यारियर सुरु हुनु अघि):
सुरुमा ब्रेथवेटलाई उनी कति लामो समयसम्म त्यो व्हीलचेयरमा बस्छु भनेर भनिएन। यो मात्र हो कि उसले कुर्नु पर्‍यो, दिनको प्रतिक्षा गर्दै उसको हड्डीहरू कतै बलियो हुने थिए उनलाई हिड्ने मात्र नभई फेरि बलमा लात लिन पनि। मार्टिनको आनन्द ब्रेथवेटका अभिभावक र परिवारका सदस्यहरूलाई कुनै बाध्यता थाहा थिएन किनकि मार्टिन व्हीलचेयरबाट माथि उठेपछि दुई बर्ष, पहिले भन्दा बलियो हुँदै। उसलाई दिइएको थियो “OK"डाक्टरहरूले उनको फुटबल खेलिरहेका छन्, जो केवल उहाँलाई मात्र महत्त्व छ।
जब यो उनको फुटबल शिक्षा शिक्षाको कुरा आयो, मार्टिन फेरि आफ्नो बुबा, कीथ ब्रेथवेटको पतन भयो। किथले उनका छोरासँग घण्टौं स्थानीय पिचमा बिताए र उनलाई ब्राजिलियन स्टारबाट प्रेरणा लिन प्रोत्साहित गरे रोनाल्डो। बोल्दै फ्रेन्चफुटबलकुलम २०१ 2016 मा, मार्टिनले एक पटक भने;
"मेरो बुबाले मलाई रोनाल्डो डे लिमाको इशाराहरू र ड्राइबलि observe अवलोकन गर्न जिद्दी गर्नुभयो"
मार्टिन ब्रेथवेटको जीवनी- प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
एक सफल परीक्षण पछि, ब्रेथवेट डेनिस स्थानीय क्लबको एकेडेमी रोस्टरमा भर्ना भए। सेडिding्ग-गुलडाजर इड्रोस्टफॉरनिंग (SGI)। अगाडि बढ्नको लागि, उहाँ आफ्नो शहरको सब भन्दा ठूलो क्लबमा सामेल हुनुभयो, Esbjerg fB। त्यसपछि उनले छोटो समय एफसी मिड्जिलल्याण्डको खेल प्रतिष्ठानमा बिताए, फेरि एस्बर्गमा सर्नु अघि उनी आफ्नो परिवारसँग नजिक हुन सके।
चाँडै, मार्टिन विदेशमा आफ्नो फुटबल खेल्न उत्सुक थिए जो यो महत्वाकांक्षी एकेडेमी खेलाडी भयो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… एस्बर्ग एकेडेमीमा उनको दोस्रो कार्यकालको समयमा, युवा डेन रेग्जिना र न्यूकासल युनाइटेड दुबैको साथ मुद्दा चले। पारिवारिक कारणका लागि, उसले एस्बर्ज एफबीको साथ वरिष्ठ फुटबलको लागि समाधान गर्ने निर्णय गर्यो।
ब्राथवेट पहिलो टीम डेनिस फुटबलमा एक छाप पार्न द्रुत थियो किनकि उसले आफ्नो टीमलाई २०१२-१ his सत्रमा डेनिस कप जित्न मद्दत गर्‍यो। यो उपलब्धि हासिल गर्दा उनले युरोपेली क्लबहरू, विशेष गरी सेल्टिक, हल सिटी र टुलूसको चासो आकर्षित गरिरहेको देखे।
मार्टिन ब्रेथवेट जीवनी- फेम कथा कहानी
मार्टिन अन्ततः फ्रान्समा टुलुसमा सामिल हुन २ मिलियन डलरको लागि बसाई सरे जहाँ उसले तुरुन्तै जमिनमा हिर्कायो। मार्टिन ब्रेथवेटको परिवारका सदस्यहरू विशेष गरी उसको बुवाको खुसीको लागि, युवा डेनले आफ्नो वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कल-अप प्राप्त गर्‍यो जब टूलूससँग पहिलो सत्रमा।
भ्वाइलेट्सका लागि 35 goals गोल गरेपछि (टूलूज एफसीको उपनाम), मार्टिन जसले क्लबको कप्तान बनेको स्थानान्तरण बजारमा तातो भएको छ। उनले चाँडै इ England्ल्यान्डमा आफ्नो स्केटसेटको स्वाद लिने निर्णय गरे, जहाँ उनी मिडल्सब्रामा सामेल भए। दुर्भाग्यवस, ब्रेथवेट रिभरसाइड स्टेडियममा प्रमुख छाप छोड्न असफल भयो। इ England्ल्यान्डले उनलाई कहिले पनि फाइदा गरेन र यो विकासले उनलाई अगाडि यात्री बनायो।
मार्टिनले बोर्डेक्स र लेगानसको साथ movesण चाल स्वीकारेर आफ्नो बक्यौता तिरेको थियो, पछि उसले पछि बसे। यद्यपि ब्रैथवेटको प्रख्यात वर्षहरूको सडकमा सब भन्दा ठूलो आकर्षण तब आयो जब उसले आफ्नो एउटा ट्रेडमार्क अन्तर्राष्ट्रिय गोल दिए, जुन एउटा प्रशंसकले उनलाई उपनाम दिएको देख्यो "स्ट्रीट फाइटर"।
Streetfitter उपनाम आयो, यो लक्ष्य को लागी धन्यवाद।
ख्याति कथामा उदय:
ठ्याक्कै २० फेब्रुअरी २०२० मा, मार्टिन ब्रेथवेटका आमा बुबा र परिवारका सदस्यहरूको खुसीको सीमा थिएन जुन बारकाले आफ्नो रिहाइको धारा सुरु गरे र उनलाई हस्ताक्षर गरे। धन्यबाद, ब्राथवेट बारन शर्ट लगाउने इतिहासका पाँचौं डेनिस खेलाडी, एलन साइमनसेन पछि, माइकल लाउड्रप, थॉमस क्रिश्चियनसेन र रोनी एकेलुन्ड।
आफ्नो पहिलो फिल्म पछि, बार्का नयाँ केटाले ठट्टा गरे कि उनले “उसको लुगा धुने छैन"बाट अug्क प्राप्त गरे पछि लिओनेल मेस्सी। GOAT को लागी आफ्नो प्रेम दाबी गर्दै, मार्टिनले एक पटक भने;
“यदि फुटबल धर्म थियो भने, Messi भगवान हुन सक्छ "
नयाँ बार्का केटाले एक पटक मेस्सीको साथ पहिलो अँगालोमा आफ्नो लुगा धुने कसम गरे।
बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो.
मार्टिन ब्रेथवेटपत्नी र बच्चाहरु:
प्रत्येक सफल मानिस पछाडि, एक महिला सधैं छ। मार्टिन जस्ता सफल फुटबलर को लागी, एक ग्लैमरस प्रेमिका पहिले आयो जसले पछि आफ्नी श्रीमती बनाए। उनी अरू कोही छैनन्, प्रसिद्ध फ्रान्सेली पत्रकार र टिभी कार्यक्रम होस्ट एनी-लोरे लुइस।
मार्टिन ब्रेथवेटकी श्रीमती, एन-लोरे लुइसलाई भेट्नुहोस्।
मार्टिन ब्रेथवेटले उनको भावी पत्नी एनी-लोरे लुइसलाई उनको कार्यस्थल मार्फत भेटे, धेरैपटक फ्रान्सेली टिभीमा उनको प्रशंसा गरे। प्रेमी केटाले एक मिति र बाँकीको लागि अनुरोध गरे, उनीहरूले भनेजस्तै, विवाहमा समाप्त भयो।
मार्टिन ब्रेथवेट र एनी-लौरे लुइस विवाह फोटो।
जसरी उनको श्रीमान्, एनी-लोरे लुइस पनि एक परिश्रमी महिला हुन्। सहयोग पत्रकारिता, उनले पनि फेसन मा उद्यम गरेको छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… एनी-लोरे लुइस कपडा ब्रान्डको संस्थापक हो; @trentefrance।
माथिको फोटोलाई हेरेर तपाई मसँग सहमत हुनुहुन्छ कि मार्टिन जस्तो सुन्दर केटा र एनी-लरे लुइस जस्ता सुन्दर महिला राम्री बच्चा पाउन योग्य छ। दुबै जोडी आमा बुबा हुन् तीन बच्चाहरू (रोमिओ लायन ब्रेथवेट एट अल), चौथो बच्चाको साथ (एक छोरा) अप्रिल २०२० मा अपेक्षित छ।
मार्टिन ब्रेथवेटका बच्चाहरू र पत्नीलाई भेट्नुहोस्।
मार्टिन ब्रेथवेटको फुटबलबाट टाढाको व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरू चिन्नुले तपाईंलाई उसको व्यक्तित्वको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
फुटबलबाट टाढाबाट सुरु गर्दै डेनले आफ्नो फुटबल पैसालाई कसरी र कहाँ लगानी गर्ने भनेर बढी सोच्दछन्। आफ्नो फुटबल क्यारियरको बारेमा मोहित भए पनि, मार्टिन आफ्नो फुटबल क्यारियर पछि भाँचिने लगातार डर संग बाँचिरहेका छन्। ऊ लगातार आफ्नो क्यारियर समाप्त भएपछि के गर्ने भनेर सोच्दछ।
मार्टिन ब्रेथवेटको व्यक्तिगत जीवन फुटबलबाट टाढा जान्न। उनी आफ्नो क्यारियर समाप्त भए पछि भाँचिन सक्ने निरन्तर डरमा बस्छन्, जुन उसले जितेको छ।
शायद तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ?… मार्टिन ब्रेथवेटको परिवार अमेरिकाको घर जग्गा व्यवसायमा नजिकको छ। एफसी बार्सिलोनाले उनका काका र हजुरबुबासँग साझेदार गरे, किनभने उनीहरूले अमेरिकाको फिलाडेल्फियाका विद्यार्थीहरूको लागि आवासमा लगानी गर्छन्।
अन्त्यमा, मार्टिन ब्रेथवेटको व्यक्तिगत जीवनमा, उनको व्हीलचेयर कहानीले सीमितता भन्दा अवसरहरूमा केन्द्रित हुने बारेमा बढी सिकेको छ। यसले उसलाई परोपकारी दानमा परिणत गरेको छ, जसले अरूलाई प्रेरित गर्ने आशामा फुटबललाई परोपकारीको साथ जोड्दछ।
तपाईंलाई थाहा छ?…, २०१/2016/२०१ season को मौसममा, मार्टिनले यो सिर्जना गर्यो # स्कोर २ मद्दत ह्याशट्याग। उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे बच्चा र सीमितताका साथ बच्चाहरूलाई मद्दत गर्ने दृष्टिकोणले, उसले प्रत्येक गोलको लागि € १€०० दान गर्नुहोस्। तल उसको पहिलो र दोस्रो दानको एक स्क्रीनशट छ, मार्टिन ब्रेथवेटको जीवनी उसले कहिल्यै बिर्सन सक्दैन।
डेनले अरूलाई प्रेरित गर्ने आशामा परोपकारीको साथ फुटबलको संयोजन गर्दछ।
मार्टिन ब्रेथवेटको पारिवारिक जीवन:
मार्टिनको लागि परिवार सबै थोक हो, विश्वमा सब भन्दा महत्वपूर्ण चीज, आफ्नो प्रख्यात भन्दा पनि बढी। यस खण्डमा, हामी मार्टिन ब्रेथवेटका आमा बुबा र उनका परिवारका बाँकी सदस्यहरू (उसको बहिनी, काका र हजुरबुबा) लाई बढी प्रकाश दिन्छौं।
बारेमा थप मार्टिन ब्रेथवेटको Dad:
उहाँलाई चिन्नेहरूका लागि, मार्टिन ब्रेथवेटका बुबा (कीथ ब्रेथवेट) वरिपरि सबै भन्दा राम्रो होमबॉय हो, विशेष गरी जब यो आफ्नो बुबा र हजुरबुबाको कर्तव्यहरू गर्न आउँछ। सत्य कुरा के हो भने, धेरै ग्रानानीहरूले दादा-हुडका चुनौतीहरू जित्नको लागि युक्तिहरू र चालहरू जान्नको लागि किथको सहयोग लिन चाहान्छन्, विशेष गरी कराटे सीपहरूको प्रयोगलाई लागू गर्ने।
मार्टिन ब्रेथवेटका बुबा, किथलाई भेट्नुहोस्
माथिको फोटोमा मार्टिन ब्रेथवेटको पारिवारिक जीवनको वास्तविक चित्रण गरिएको छ। कुनै श doubt्का बिना,केटाहरू सँधै केटाहरू हुन्छन्“। अब मार्टिन ब्रेथवेटका बुबा (कीथ) को सुपर भिडियो जाँच गर्नुहोस् किनकि उनले आफ्नो छोरी, माथिलडेको उपस्थितिमा, आफ्नो नातिना पोतेरालाई उसको कराटे कौशल प्रदर्शन गरे।
धेरै बुढेसकालका बुवाहरू जत्तिकै, किथ ब्रेथवेट पनि ती व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो मनपर्ने चलचित्रहरू हाइप गर्नुहुन्छ तर निद्रामा नलगाइकन यसलाई १० मिनेट भन्दा बढीको लागि हेर्न सक्नुहुन्न। यहाँ मार्टिनको एक भिडियो उसको बुवालाई गिज्याएको छ। अब, हामीलाई व्यक्ति बताउनुहोस् (हाम्रो टिप्पणी सेक्सन) जो यस सम्बन्धमा तपाईंको दिमागमा आउँछ।
बारेमा थप मार्टिन ब्रेथवेटको आमा:
महान् आमाहरूले एक महान छोरा र मार्टिनको सुन्दर आमा उत्पादन गरेको छ (Heidi Braithwaite) एक अपवाद होईन। केही फुटबल खेलाडीहरूको विपरीत, हेदी त्यस्तो प्रकारका होइनन् जसले आफ्नो छोरा युरोपको अन्वेषण गर्ने बेलामा धेरै पछि डेनमार्कमै बस्न रोज्थे। उनी, सँगै ब्रेथवेटको परिवार एक पटक फ्रान्समा बस्थे जहाँ उनका छोराले उनको फुटबल खेले। तल हेउडीको उनको सबैभन्दा मिल्ने साथी लिस्बेथ मार्केबर्ग र छोराको साथ फोटो छ, जब उनी टुलूसमा बस्थे।
मार्टिन ब्रेथवेटकी आमा उनको सब भन्दा राम्रा साथी र छोरा मार्टिनको साथ चित्रित छन्।
मार्टिन ब्रेथवेट बहिनी:
यस लेखको मार्टिन ब्रेथवेट बाल्यकाल कहानी कहानीमा त्यो सानो बच्चा याद छ? ... हामीले अनुमान गरिसक्यौं, उनी मार्टिन ब्रेथवेटकी दिदी हुन सक्छिन् जो मथिल्डे ब्रेथवेट भनेर जान्छिन। उनी सबै परिपक्व र पक्कै पनि राम्री छिन्।
मार्टिन ब्रेथवेटकी बहिनी, मथिल्डे ब्रेथवेटलाई भेट्नुहोस्। उनी राम्री छैनिन?
मार्टिन ब्रेथवेट काका:
यस्तो देखिन्छ कि माथील्डे ब्रेथवेटको परिवारमा, उसको बुबा सम्भवतः पहिलो बच्चा हुन्। तिमीलाई किन थाहा थियो?… किनभने मार्टिनका धेरै साना काका छन् जो सम्भवतः आफ्नो बुबाको बच्चा भाई हुन सक्छ। तल चित्रमा उसको दुई काका छन् जो सम्भवतः उनीहरूको 30० वा 40० को उमेरमा छन्। फिलिप माइकल माथिलडे (दायाँ चित्रित), जबकि इयान चान बाँया चित्रण छन्।
मार्टिन ब्रेथवेट का काका- फिलिप माइकल सही छ र इयान चान बाँया।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… फिलिप माइकल माथिलडे मार्टिनको व्यापार साझेदार हो, उनको घर जग्गा व्यवसायमा सँगी लगानीकर्ता। फिलिप एक लेखक पनि हो, जसले वित्तको बारेमा धेरै उत्कृष्ट विक्रेता पुस्तकहरू उत्पादन गरेका छन।
मार्टिन ब्रेथवेट हजुरबा हजुरआमा:
फ्रेड क्रिस्टनसेन उनको आमाको पक्षबाट मार्टिन ब्रेथवेटको हजुरबा र व्यापार साझेदार हुन्। तल चित्रित, फ्रेडे तीन दशक भन्दा बढीको लागि एस्बर्ग डेनमार्कमा एचटीएच किचनका पूर्व निर्देशक थिए। अचल सम्पत्ति लगानीमा उनीसँग years 33 बर्षको अनुभव छ, यस कारणले गर्दा उनलाई आफ्नो नातिले उसको व्यवसाय साझेदारका रूपमा छान्छन्।
मार्टिन ब्रेथवेटका हजुरबा हजुरआमा - उसको हजुरबुबा, फ्रेडे क्रिस्टनसेनलाई भेट्नुहोस्
डेनिश फुटबलरले आफ्नो सम्पत्ति उसको सम्पत्ति व्यवसाय, करार, वेतन, बोनस, र समर्थनबाट कमाउँछ। उसको सम्पत्ति शून्य दायित्वलाई हेर्दा, मार्टिन ब्रेथवेटको १०.०० मिलियन भन्दा बढीको कुल सम्पत्ति छ। यो उसलाई एक करोडपति हुन सक्छ र यो पनि, एक विदेशी जीवनशैली को सूचक।
एफसी बार्सिलोना अगाडि बार्सिलोना मा एक संगठित जीवन बिताउँछ, जीवन को आफ्नो सम्पत्ति प्रदर्शन बाट वञ्चित। ऊ त्यस्तो फुटबलर होइन जो इन्स्टाग्राममा चम्किलो कार, ठूला घरहरू (हवेली), महँगो लगाउने इत्यादि प्रदर्शन गर्न जान्छ। मार्टिनले राम्रो कार चलाउँछन् र आफ्नो परिवारसँग धेरै समय खर्च गर्दछन्।
मार्टिन ब्रेथवेटको जीवनशैली उसको व्यक्तित्वको स्पष्ट प्रतिबिम्ब हो। क्रेडिट: ट्विटर
मार्टिन ब्रेथवेटको तथ्यहरु:
मार्टिन ब्रेथवेटको जीवनीको यस अन्तिम खण्डमा हामी तपाईंलाई तिनका केहि अनावश्यक तथ्यहरू बताउनेछौं।
वास्तवमा #1: उसको तलब ब्रेकडाउन:
बार्सिलोना संग उनको आगमन पछि, धेरै प्रशंसकहरूले प्रश्न सोधेको छ; मार्टिन ब्रेथवेटले कति कमाउँछ?…। लेगनेसमा हुँदा, अगाडिको सम्झौताले उसलाई चारै तिरको ठूलो तलब पोकेको देख्यो € 1,738,000 प्रति वर्ष। उसले बार्सिलोना (खेलाडी विकी रिपोर्ट) मा यस्तै वेतन कमाउँछ। थप आश्चर्यजनक तल मार्टिन ब्रेथवेटको तलब ब्रेकडाउन प्रति वर्ष, महिना, दिन, घण्टा, मिनेट र सेकेन्ड (लेख्ने समयमा जस्तै) हो।
पाउन्ड स्टर्लिंग (£) मा कमाई
यूरोमा कमाई (€)
प्रति महिना: £ 122,187.5 € 144,833
प्रति हप्ता: £ 30,546 € 36,208
प्रति दिन: £ 4,366.2 € 5,172.6
प्रति घण्टा: £ 181.92 € 215.5
प्रति मिनेट: £ 3.032 € 3.59
प्रति सेकेन्ड: £ 0.05 € 0.06
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो मार्टिन ब्रेथवेटबायो, यो उसले कमाएको हो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… स्पेनमा औसत व्यक्तिले कम्तिमा .7.4..XNUMX वर्ष कमाउन काम गर्नु पर्छ € 144,833, जुन मार्टिन ब्रेथवेट एक महिनामा कमाउँछ।
वास्तवमा #2: निराश FIFA तथ्यहरु:
फिफा तथ्यहरु ले मार्टिन अत्यधिक मुल्या under्कन गरिएको छ प्रकट गर्दछ। क्रेडिट: SoFIFA
अद्यावधिक प्लेयर रेटिंगहरू जहिले पनि छलफलको लोकप्रिय विषय हुन्छ नयाँ फिफा जारी हुँदा। फिफा २० मार्टिन ब्रेथवेटका लागि फरक छैन। डेनिस फुटबलर फुटबल खेलाडीहरू मध्ये एक हुन् जसले आफु अन्डरित भएको थाहा पाउँदा दुर्भाग्य पाए। अब प्रश्न छ; के फिफाले आफ्नो रेटिंग बढाउने छ, अब ऊ एफसी बार्सिलोनाको लागि खेलिरहेको छ?
वास्तवमा #3: के हो मार्टिन ब्रेथवेटको धर्म?
"सेन्ट मार्टिन" सबैभन्दा परिचित र चिन्न योग्य रोमन क्याथोलिक सन्त मध्ये एक हो। साथै, मार्टिन ब्रेथवेटका बाबुआमाले उनलाई बीचको नाम दिन सहमत भए "Christensen"जुन शाब्दिक अर्थ"क्रिस्टनको छोरा“। यो दिईएको क्रिश्चियनको एउटा सामान्य डेनिश भेरियन्ट हो, जुन ग्रीक शब्दबाट लिइएको हो (christianos), अर्थ "ख्रीष्टको अनुयायी" निस्सन्देह, मार्टिन ब्रेथवेटका आफन्तहरूसँगै परिवारका सदस्यहरूले पनि इसाई धर्म स्वीकार्छन्।
वास्तवमा #4: मार्टिन ब्रेथवेटको टैटू तथ्य:
ट्याटू संस्कृति आजको खेलकुद संसारमा धेरै लोकप्रिय छ किनकि हामीलाई थाहा छ धेरै फुटबलरहरू अक्सर उनीहरूको धर्म र परिवारका सदस्यहरूको चित्रण गर्न यसलाई प्रयोग गर्छन्। मार्टिन लेखेको समयमा ट्याटुमुक्त हुन्छ, उसको माथिल्लो र तल्लो शरीरमा कुनै मसी हुँदैन।
वास्तवमा #5: एक बच्चाको रूपमा समर्थित मैड्रिड:
एक मार्टिन ब्राइथवेट तथ्यहरू तपाईलाई कहिले थाहा थिएन त्यो त्यो हो जुन उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दछ बच्चाको रूपमा रियल मैड्रिडको लागि समर्थन गर्दछ। २०११ मा जब उनले हडस्टन डेनमार्कमा प्रकाशित लोकालावेसन, अखबारको अन्तर्वार्ता लिएका थिए तब उनले यो कुरा थाहा पाए। यो जहाँ हामी यसमा रोकिन्छौं, हामीले त्यसलाई ड्रिल गर्नु पर्दैन।
वास्तवमा #6: यो क्रिस ब्राउन सम्मेलन:
के त्यहाँ क्रिस ब्राउनसँग उल्लेखनीय समानता छ? हामीलाई टिप्पणी सेक्सनमा थाहा दिनुहोस्। क्रेडिट: ट्रिबुन
यो हुन सक्छ, मार्टिन ब्रेथवेट तथ्यहरु जुन हामीले शर्त लगाउँछौं, सायद तपाईलाई चकित पार्ने छ। एफसी बार्सिलोनाको लागि हस्ताक्षर गरेपछि, फुटबल प्रशंसकहरूले पिचमा नयाँ क्रिस ब्राउन देख्न थाले। लेख्ने समयमा जस्तै (Tribuna रिपोर्ट), केहि फुटबल प्रशंसकहरु अझै मार्टिन ब्रेथवेट र क्रिस ब्राउन दाजुभाइ हुन् जस्तो लाग्छ। अब १ देखि १० सम्मको मापनमा, के मार्टिन र अमेरिकी रैपर एकै देखिन्छन्?.
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो मार्टिन ब्रेथवेट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
मार्टिन ब्रेथवेटको जीवनी तथ्य (विकी इन्क्वायरी)
पुरा नाम: मार्टिन क्रिस्टनसेन ब्रेथवेट
उपनाम: स्ट्रीट फाइटर
अभिभावक: हेडि ब्रेथवेट (आमा) र कीथ ब्रेथवेट (पिता)
Siblings: माथिल्डे ब्रेथवेट (बहिनी)
काका: फिलिप माइकल मैथिलडे र इयान चान
हजुरबा हजुरआमा: फ्रेडे क्रिस्टनसेन (आफ्नो आमाको पक्षबाट)
पारिवारिक मूल: एस्बर्जग, डेनमार्क र गुयाना (दक्षिण अमेरिका)
उचाइ: 1.77 मीटर (5 फुट 10 मा)
उमेर: २ ((मार्च २०२० सम्म)
व्यवसाय: फुटबलर (अगाडि)
परिमार्जित मिति: डिसेम्बर २,, २०१ 8